24 "iMac miaraka amin'ny processeur M1 dia miova ho" Shipped "| Avy any Mac aho
24 ″ iMac miaraka amin'ny processeur M1 dia miova ho "Shipped"
Ireo mpampiasa rehetra nametraka baiko ho an'ireo iMac vaovao 24-inch miaraka amin'ireo processeur M1 an'i Apple dia mijery hatrany raha miova ny satan'ny fandefasana. Toa hita izao fa misy amin'ireo mpampiasa ireo no mahita fiovana amin'ny baikony mampiseho fambara "Nalefa" tamin'ny alàlan'ny 21 Mey matetika.
Mazava ho azy, ireo baiko ireo dia iray amin'ireo voalohany izay namboarin'ny iMac raha vantany vao afaka nitahiry izy ireo ary mazava ho azy fa solosaina izay tsy nanana fanovana tamin'ny lafiny singa, izany hoe momba ny amin'ny ankamaroan'ny tranga iMac izay tsy manana fikirana manokana.
Raha ny tokony ho izy dia toa ny mpampiasa voalohany avy any Canada no voalohany mandray ireo iMac ireo, ary izany dia amin'ny Internet MacRumors manondro mazava ny mpamaky roa azy ireo ary monina ao amin'io firenena io izy ireo. Fantatray fa maro amin'ireo mpampiasa avy amin'ny toerana hafa no hanomboka handray fanovana ao anatin'ny ora vitsy raha tsy mbola nanao izany izy ireo.
Marina fa ny fandefasana an'ireto iMac ireto toy ny an'ny iPad Pro natolotra ny volana aprily lasa teo dia mihemotra be amin'ny fandefasana azy ireo, ary izany dia vokatry ny anton-javatra maro mihoatra ny Apple ihany fa misy akony mivantana amin'ireo mpampiasa azy. Atsipazo ity jereo ny baiko napetraka manomboka amin'ny "fanodinana" ka hatramin'ny "fanomanana fandefasana" ary avy eo dia "alefa" Miaraka amin'ny daty nanamarihana ny fahatongavany, tsy isalasalana fa fifaliana ho an'ireo mpampiasa izany ary maro amin'izy ireo no ao anatin'ity toe-javatra ity.
Nividy iMac 24-inch ve ianao? Efa niova ve ny satan'ny kaomandy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » iMac » 24 ″ iMac miaraka amin'ny processeur M1 dia miova ho "Shipped"
Ny tranofiara voalohany an'ny miniseries Lisey's Story dia misy izao
Nomad Pet Pet Pet ary ny KeyChain henjana ho an'ny AirTags